လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း အကျိုး - SANTHITSA
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း အကျိုး
ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်အား သွေးကျဆေး ကဲ့သို့ အကျိုး သက်ရောက် စေတယ်ဆိုတာ သင် သိပါရဲ့လား ။
သုတေသီ တွေရဲ့လေ့လာမှု အဆို ပြုချက် အရ သွေးတိုး ရောဂါ ရှိသူပဲ ဖြစ်စေ သွေးတိုး ရောဂါကို ဖြစ်မလာ စေရန် ကာကွယ် ချင်လို့ပဲဖြစ်စေ သင်ဟာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုကို ပြုလုပ် ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
ဗြိတိန် သုတေသီ တို့ရဲ့ လေ့လာမှု ၁၉၄ ခုရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်ပုံ ကို လေ့လာမှုပေါင်း ၁၉၇ ခုကနေ စစ်တမ်း ထုတ် ရယူခဲ့ ကြတာပဲဖစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။
အစောပိုင်း သုတေသန ပြုသူ တွေရဲ့အဆိုကတော့ လေ့ကျင့်ခန်း ထက် ဆေးဝါးတွေက သာ သွေးပေါင်ချိန် ကို ထိန်းပေး တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် ။
သို့သော် သုတေသီ အချို့ရဲ့လေ့လာမှု အရ သွေးပေါင်ချိန် မကြာခဏ မြင့်တက်လေ့ ရှိသူတွေကို သေချာ လေ့လာမိတဲ့ အခါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းဟာ ဆေးဝါးများ သောက်သုံးခြင်း နဲ့ တူညီတဲ့ အကျိုးသက် ရောက်မှုကို ရစေနိုင်တယ် ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သို့ပေမဲ့ လည်း သွေးတိုးရောဂါ ရင့်နေသူတွေ အနေနဲ့ ကတော့ ရုတ်တရက် သွေးထိန်းဆေး ကို ရပ်လိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ကိုပဲ မပြုလုပ်ပါနဲ့ လို့ ဆိုထား ပါတယ် ။ သုတေသီ တွေရဲ့ သတိပေးချက် ကတော့ မိမိရဲ့ သွေးတိုး ရောဂါ အခြေအနေနဲ့ မျှချေ ညီမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ် ခြင်းကိုသာ ရွေးချယ် ရမယ် ဆိုတာပါပဲ…. ။
လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျခွငျး အကြိုး
ကိုယျလကျ လှုပျရှားမှုနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျခွငျးဟာ သငျ့အား သှေးကဆြေး ကဲ့သို့ အကြိုး သကျရောကျ စတေယျဆိုတာ သငျ သိပါရဲ့လား ။
သုတသေီ တှရေဲ့လလေ့ာမှု အဆို ပွုခကျြ အရ သှေးတိုး ရောဂါ ရှိသူပဲ ဖွဈစေ သှေးတိုး ရောဂါကို ဖွဈမလာ စရေနျ ကာကှယျ ခငျြလို့ပဲဖွဈစေ သငျဟာ ကိုယျလကျ လှုပျရှားမှု လကေ့ငျြ့ခနျး တဈခုခုကို ပွုလုပျ ပေးရမယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
ဗွိတိနျ သုတသေီ တို့ရဲ့ လလေ့ာမှု ၁၉၄ ခုရဲ့ အကြိုး သကျရောကျပုံ ကို လလေ့ာမှုပေါငျး ၁၉၇ ခုကနေ စဈတမျး ထုတျ ရယူခဲ့ ကွတာပဲဖဈတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ ။
အစောပိုငျး သုတသေန ပွုသူ တှရေဲ့အဆိုကတော့ လကေ့ငျြ့ခနျး ထကျ ဆေးဝါးတှကေ သာ သှေးပေါငျခြိနျ ကို ထိနျးပေး တယျလို့ ဆိုကွပါတယျ ။
သို့သျော သုတသေီ အခြို့ရဲ့လလေ့ာမှု အရ သှေးပေါငျခြိနျ မကွာခဏ မွငျ့တကျလေ့ ရှိသူတှကေို သခြော လလေ့ာမိတဲ့ အခါ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျခွငျးဟာ ဆေးဝါးမြား သောကျသုံးခွငျး နဲ့ တူညီတဲ့ အကြိုးသကျ ရောကျမှုကို ရစနေိုငျတယျ ဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့ ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
သို့ပမေဲ့ လညျး သှေးတိုးရောဂါ ရငျ့နသေူတှေ အနနေဲ့ ကတော့ ရုတျတရကျ သှေးထိနျးဆေး ကို ရပျလိုကျပွီး လကေ့ငျြ့ခနျး ကိုပဲ မပွုလုပျပါနဲ့ လို့ ဆိုထား ပါတယျ ။ သုတသေီ တှရေဲ့ သတိပေးခကျြ ကတော့ မိမိရဲ့ သှေးတိုး ရောဂါ အခွအေနနေဲ့ မြှခြေ ညီမဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျ ခွငျးကိုသာ ရှေးခယျြ ရမယျ ဆိုတာပါပဲ…. ။
Total Visit : 142774
Total Hits : 2076321